ဂေါင်းဂျီး big head | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ဂေါင်းဂျီး big head
ဂေါင်းဂျီး big head
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Sep 14, 2012 in Aha! Jokes, Satire | 22 comments
မြန်မာပြည်တွင် နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာများ ပုံနှိပ်ခွင့် ပေးလိုက်ရာ သတင်းစာအများအပြား ထွက်ပေါ်လာရာ အမေရိကန်အခြေစိုက် စကိုင်းဘီလူးသတင်းစာလည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်ခွင့် အပြည့်အဝရှိသော ကမ္ဘာ့ထိပ်သီး ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထွက် ဖြစ်ရကား အများနှင့်မတူ ကိုယ်ဗိုင်အတွေးအခေါ် အရေးအသားစစ်စစ်ကို လွန်စွာအားပေးသည်။ စစခြင်း မျက်နှာဖုံးသတင်းမှာ စက်တင်ဘာ ၄ရက်နေ့၌ ကျင်းပသော ဆာမိတေးဂီတပွဲ စင်မြင့်အထက် မီနီစကပ်အတိုလေးဝတ် သီဆိုနေသော အဆိုတော်မိုးစက်အား အောက်မှပင့်ရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံနှင့်ဖြစ်သည်။ ကာလသားအပေါင်း ကြိတ်ကြိတ်တိုး ဝယ်ယူအားပေးကြသည်မှာ ရောင်းမလောက်၍ ရဲဖြင့်အတော်ထိန်းယူရသည်။ မမ်းဂဇက်သတင်းစာမှာ အတော်ပေါက်သွားလေပြီ။ ဟိတ်တလုံး ဟန်တလုံးဖြင့် သတင်းဈေးကွက်ထဲ နေရာယူထားသော မန်မြာတိုင်းမ်စ်၊ အလဲဗျင်းသတင်းစာတို့မှာ ထိုနေ့က ကွမ်းယာဆိုင်၊ မုန့်ဆိုင်တို့တွင် အထူးလျော့ဈေးဖြင့် လက်သိပ်ထိုး ရောင်းချခဲ့ရသည်။
အယ်ဒီတာချုပ် စကိုင်းဘီလူး ဦးခိုင်၏ တကဲ့အကြံအစည်ကား အတည်အခန့် ဂေါင်းကြီးပိုင်း အရေးအသားဖြင့် နိုင်ငံရေးလောကတွင် ပုရောဟိတ် ဆရာဂျီးတဆူ လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ သူ၏ နိုင်ငံရေး ခန့်မှန်းချက်များ မှန်ကန်တိကျရန် သိပ်အရေးကြီးသည်။ သဂျီးဦးခိုင်ကား မခေ၊ ကိုဘေးနွားကြီး တကောင်လုံးကို အရိုးပါမကျန် ကျေကျေညက်ညက် ဝါးစားနိုင်သူဖြစ်သည်။ သတင်းစာ ဂေါင်းကြီးပိုင်းကို ကိုယ်တိုင်ရေးပြီး ဂေါင်းသေးပိုင်းကိုမူ ဦးကြောင်ကြီးအား တာဝန်ပေးသည်။ အရေးအသား နှစ်ခုအား ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်အောင် တမင်စီမံထားပုံမှာ ကချင်တွင် တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်တော့မည်ဟု ဂေါင်းကြီးတွင်ရေးလျင်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး မကြာခင် ရတော့မည်ဟု ဂေါင်းလေးတွင် ရေးစေသည်။ သမဒဂျီး နေမကောင်းဆိုလျင် အခြားတဖက်တွင် သမဒဂျီး ဧဝရက်တောင်တက် ခရီးထွက်နိုင်လောက်အောင် ဒေါင်ဒေါင်မြည် ကျန်းမာသည်၊ ထို့အတူ နိုင်ငံပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး အရှိန်ရနေပြီ၊ မဟုတ်ပါ နှေးကွေးလွန်းသည် စသဖြင့် ကွဲလွဲရေးသား ရလေကား နတ်မျက်စိရထားသူ နိုင်ငံရေး ပဏ္ဍိတ်ကြီး တဆူသဖွယ် နာမည်ကြီးသည်။ အမေရိကန် သမ္မတပင် အိမ်ဖြူတော်ခေါ်၍ မြန်မာ့အရေး တိုင်ပင်ရလေသည်။
သူ့နာမည်ကိုလည်း စကိုင်းဘီလူးမှ ဂေါင်းဂျီးဟု လူအများ ပြောင်းခေါ်ကြသည်။ ကြောင်ကြီးမှာကား သူကဲ့သို့ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် မရေးသဖြင့် ထိုသို့အမည်တပ် အခေါ်မခံရချေ၊ သတင်းစာ အယ်ဒီတာ ဆရာ ဦးကြောင်ကြီး ဟုသာ တလေးတစား ခေါ်ကြသည်။ ဦးခိုင် ဘာလုပ်သည်ကို သေသေချာချာ မသိသူကာလသား အပေါင်းကား သူလာလျင် တရုန်းရုန်းနှင့် ပွဲတော်ကြီးတမျှ စည်ကားလှသည်။ “တရှော့ကို ဘယ်လောက်လဲဗျ၊ အသစ်ကလေး ရောက်ရင် ပြောပါအုံး” အားပေးကြသလို ပြည်ပမှလည်း အီးမေးလ်၊ တယ်လီဖုံး၊ ဂျီတော့လ်ခ်၊ စကိုင်းပီများဖြင့် ခရက်ဒစ်ကတ် လက်ခံလားဟု တခဲနက် စိတ်ဝင်တစား မေးမြန်းစုံစမ်းကြသည်။ အစပိုင်း မနှစ်မြို့သော်လည်း မားကက်တင်း အတိုင်ဗင်ခံ နူးဘာဂီမှ brand name တခုဖြစ်ရန် မလွယ်ကြောင်း ပြောသဖြင့် ချော်လဲရောထိုင် မသိကျိုးကျွံပြု နေရာမှ အမှန်တကယ် အမည်တွင်သွားလေသည်။
ဦးခိုင် သဒင်းစာ ရောင်းသွက်နေဗုံ
အမျိုးသား မိတ်ဆွေအပေါင်းနှင့် အဆင်ပြေသလောက် အမျိုးသမီးများက နှာခေါင်းရှုံ့ ဖဲခွာရှောင်ကြဉ်ကြသည်။ ထိုအပြိုဂျီး အပြိုလေးတို့အား လိင်ကိစ္စ လွတ်လပ်စွာ ခံစားခွင့်ဆိုသည်မှာ ဖိုမ မရွေး အားလုံးနှင့်ဆိုင်ကြောင်း တစိုက်မတ်တက် စည်းရုံးလိုက်သည်တွင် unisex escort dating services ရသည်အထင်ဖြင့် စကိုင်းဘီလူး သတင်းစာ အွန်လိုင်းဆိုက်တွင် နာမည်ဝှက် အကောင့်အသစ်များစွာ ပွင့်လာလေသည်။ ထို့နောက် ဘာမှ မည်မည်ရရ မတွေ့သဖြင့် ဆဲစာများ ရေးသွားကြသည်။ စိတ်ကြီးသူ အချို့ကမူ ဆိုက်ဒ်အား ဟက်သွားသဖြင့် ၇ရက်တိုင်တိုင် အွန်လိုင်းဒေါင်း သွားလေသည်။ အကြံသမား ဦးခိုင်ကားမမှု၊ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ မက္ကာမြို့ ဘုရားဖူးခရီးမှ ပြန်လာပြီးကထဲက မရိပ်ဘဲ သိမ်းထားသော မုတ်ဆိတ်ဖြူ ဖားလျားကြီးအား လက်ဖြင့်သပ်လျက် တက်လာသော အကောင့်အသစ် အိုင်ပီလိပ်စာ၊ ဝင်းဒိုးစစ်စတမ်ကုတ်ဒ်များကို ဆာဗာမှတဆင့် နဂိုရှိပြီးသား နံပတ်များဖြင့် တိုက်ဆိုင်ကြည့်လျက် ပြုံးနေသည်မှာ မှိုရသော မျက်နှာကဲ့သို့ စပ်ဖြီးဖြီးကြီး ရှိနေပေတော့သည်။
ဦးကြောင်ကတော့ နာတော့မယ် ဟီးဟီး
ချာတူးရေ ဦးကြောင်က ခပ်ပါးပါးလေး တွတ်လိုက်တာပါတဲ့ အတော်နာသွားသလားဟင်
မှန်းးးးးးးးးးး ပြစမ်းပါဦးကြည့်ရအောင် …. အတော်လုပ်ရက်တဲ့ ဦးကြောင်ပဲ ….
ဦးကြောင် … သဂျီးမျက်နှာ အိုးမဲသုတ်မယ် မကြံနဲ့ …..
သဂျီး သမီးရော ၊ သဂျီးသားမတ်လောင်းတွေရောပေါင်းလျှင် ရွာ တ၀က်စာနီးပါးချိတယ် … ခွိခွိ
အိုးမဲတော့မသုတ်နဲ့ ကကြောင် ကတ္တရာသာလောင်းပလိုက်…
အစ်မ wow သဂျီးကို မေတ္တာထားတယ်တော့ … အဟိ …. ။ စေတနာဒွေ … စေတနာဒွေ ခွိခွိ:P
မြို့သစ် 6K-8K (without os)
night stalker 2.5K-5K
aress = at least 200K
မြန်မာနိုင်ငံပြမ်လာမည့် အုကြောင် သိချင်သော အရာများကို အခွက်ပြောင်ပြောင်ဖြင့်မန့်သည်
အဲဒါ အူးဆာမိမကောင်းတာ သူခိုင်းတဲ့အတိုင်း ကပွဲမှာဝင်ပါမိလို့ ..
ဟိုလူဂျီးကို သမတာတော့ ..
ကျုပ်က ရှည်ရှည်ချုပ်ပါလို့ ပြောသားပဲ
ကဲ ခုတော့ ကောင်းဂျသေးရဲ့ လားး
အဲဒါ ဆင်ဆာအပိတ်ခံရင်တော့လား ဟွင်းဟွင်း
အော် ဂလိုလား။ ဟက်ခံရတဲ့ကိတ်စ တရားခံပေါ်ဘီ။ အောင်ကြူးနဲ့မဂီ ကောင်းကောင်းသိသကိုး။ လုပ်ရက်ပါပေ့အေ။ စကိုင်းဘလူးသတင်းစာအွန်လိုင်းဆိုက်မှာ ဒါမျိုးတွေမတင်ဝူးဆိုတာ ဒင်းတို့မသိလေရော့သလား။ သူရို့ကြည့်ဂျင်ဒါလေးဒွေ အူးကြောင်ကိုယ်တိုင် လင့်ပေးပီးညွှန်လိုက်ပါဗျာ။ နားအေးအောင်လို့။
ဗေဒဝိနည်းဝိထိုဝိသဂျို သဘောအရ တစ်နေ့မှာ
ဂေဇက်ဆိုတာ ထိတ်ထိတ်ပျဲ ဟုတ်ပါဘူး ဒိတ်ဒိတ်ကျဲ
သတင်းစာတစ်စောင်အဖြစ် လှဲနေမြင်းဇောင်း ငရုပ်သီးမှုန့်ဆိုင် ပဲလှော်ဆိုင်ပါမကျန်
အောင်ဇေယတု အောင်ဇေယတု အောင်ဇေယတု
မရိပ်ဘဲ သိမ်းထားသော မုတ်ဆိတ်ဖြူ ဖားလျားကြီးအား လက်ဖြင့်သပ်လျက် ..
“ငါမအိုသေး..” လို့ လုပ်ပြရမလို…
ငါမအိုသေးဆိုပြီး လက်သီးလက်မောင်းတန်းခါမှ လက်ပြင်းသားတွဲတာ
လူမြင်ပြီး ဟားခံနေရအုန်းမယ် သူကြီး
သူကြီး(သူ..ကြီး..(သည်)..ခြားဖတ်ပါ)ဆိုတော့ အဲလောက်အထိကို မျှော်လင့်ထားလို့ပါ…
နော်….မpooch….းP (testing :mgreen:)
ရိုက်တာနဲ့တန်းပေါ်မလာလို့ မတင်ကြည့်တာ ပြီးတော့မှသူက ဒီလိုကိုး…
:smile: သူကြီး အောက်က သွားဖြဲလေးကို ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ အပေါ်ကစာထဲ
အရီးကို ခုနမတင်ခင်လေးကတင် မျှော်နေသေးတယ်..အဟုတ်..
ကယ်သူမဲ့ အရှက်ကွဲနေမလားလို့… :sad:
အရီးတော့ တတ်အောင် သများကို လွှတ်ထားတာကြာပေါ့ဆိုပြီး… :smile:
နှင်းနှင်းဂေးရယ်…ဦးကြောင်ကြီးကို မက်ဆေ့ခ်ျဘုတ်များ မှတ်နေသလား..သိပ်ရေးချင်ရင် ဦးကြောင်နှလုံးသားထဲ လာရေးလှည့်ပါ…ရင်ဗတ်ကြီး ဖွင့်ပေးထားပါဒယ်….
မနေ့က ခဏခဏတင်ပြီးကတည်းက ခေါင်းကြိမ်းနေတာပါ..
သားသားနဲ့မီးမီးကို(အပေါ်ပုံက) ဂရုတစိုက်ရှိပေးဖို့ လွှတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင့်..
ညောင်…ဂိန်…ကိန်..ညောင်..ဖြစ်ကြရင်တော့ တာဝန်မယူပါလို့ …